Gabar Soomaali ah oo meydkeeda laga helay Minneapolis | KEYDMEDIA ONLINE
Gabar Soomaali ah oo meydkeeda laga helay Minneapolis
Ikhlaas oo ah gabar labo sanno jir ah ayaa meedkeeda laga helay haro biyo ah oo u dhaw barxadda lagu ciyaarsiiyo carruurta ee Rosland Park oo xilligii ugu dambeysay ay la joogtay xubno kamid ah qoyskeeda.
MINNEAPOLIS, US A - Ikhlaas Cabdullahi Axmed oo aheyd laba jir ah ayaa booliska magaalada Edina ee gobolka Minnesota xaqiijiyeen in la helay meydkeeda oo la weysnaa muddo 18 saacadood baadi goob dheer kaddib.
Saqiirtan ayaa meydkeeda laga helay haro biyo ah oo u dhaw barxadda lagu ciyaarsiiyo carruurta ee Rosland Park, oo xilligii ugu dambeysay ay la joogtay xubno kamid ah qoyskeeda.
Ikhlaas oo aheyd gabar yar oo la xanuunsaneyd cudurka Austism-ka ayaa baadigoobkeeda waxaa ka qeyb qaatay ciidamada booliska, dabdamiska iyo kooxaha gurmadka oo dhowr magaalo ka kala yimid.
Taliyaha booliska magaalada Edina, Tod Melbourne ayaa tacsi tiiraayo leh u diray qoyska Ikhlaas, wuxuuna ku tilmaamay musiibo xooggan oo saameysay qalbiyadooda.
Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Edina ayaa xalay isugu yimid kulan baroordiiq ah iyo duco ahaa. Iyaga oo uga tacsiyadeeyay qoyska gabadha yar geeriyootay in sabir iyo iimaan uu Alle ka siiyo.
Tan iyo bilowgii sannadkan Minnesota oo ah gobolka ugu warraha badan Mareykanka waxaa biyaha warraha ku geeriyooday 26 ruux.